ဗဟုသုတ – PoPinVdo
မြန်မာပြည်ကို တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် ဒီစာကိုဖတ်ထားသင့်တယ်
October 16, 2018 Funny PopinဗဟုသုတNo Comment on မြန်မာပြည်ကို တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် ဒီစာကိုဖတ်ထားသင့်တယ်
အိန္ဒိယသမ္မတ ပြောသွားတဲ့ “မင်းရဲ့နိုင်ငံအတွက် အချိန် ၁၀ မိနစ်လောက် ပေးနိုင်မလား´´တဲ့ ပေးနိုင်ရင် ဒီစာလေးကိုဖတ်ကြည့်ပါ မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေအတွက် လည်း တိုက်ဆိုင်လွန်းလို့ သူငယ်ချင်းတို့ အချိန်ယူပြီး ဖတ်စေချင်တယ်။ အချိန် နည်းနည်းပေးပြီး ဖတ်ပေးပါ။ ဒီစာကို…
သူငယ်ချင်းတွေ အံ့သြသွားအောင် သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြနိုင်မယ် မျက်လှည့်ပြကွက်လေးများ
October 16, 2018 Funny PopinဗဟုသုတNo Comment on သူငယ်ချင်းတွေ အံ့သြသွားအောင် သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြနိုင်မယ် မျက်လှည့်ပြကွက်လေးများ
၁- ရေမှ ရေခဲ ဖြစ်စေခြင်း ရေဘူးတစ်ဘူးကို ရေခဲသေတ္တာထဲ ၂ နာရီခွဲလောက်ထည့်ထားလိုက်ပါ။ အခြေအနေဟာ ရေခဲဖို့အလွန်နီးစပ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တာကြောင့် ထိလိုက်တာနဲ့ခဲသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ ရေဘူးကို ငြိမ်ငြိမ်လေးကိုင်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲက ထုတ်ယူကာ ခုံပေါ်လောင်းချလိုက်မယ်ဆိုရင် ခုံနဲ့ထိထိချင်း ခဲသွားပါလိမ့်မယ်။ ၂-…
ရှေးခေတ်က မြန်မာဘုရင်တွေရဲ့ သမီးတော်တွေနဲ့ မိဖုရားတွေရဲ့ မဟာဆန်တဲ့ ပင်ကိုယ်သဘာဝအလှ
October 16, 2018 Funny PopinဗဟုသုတNo Comment on ရှေးခေတ်က မြန်မာဘုရင်တွေရဲ့ သမီးတော်တွေနဲ့ မိဖုရားတွေရဲ့ မဟာဆန်တဲ့ ပင်ကိုယ်သဘာဝအလှ
ရှေးက မြန်မာဘုရင်တွေ ရဲ့ သမီးတော်တွေနဲ့ မိဖုရားတွေထဲမှာ မဟာဆန်ဆန် လှတဲ့သူတွေ လဲ အများကြီး ရှိပါတယ်နော် ရတနာ နတ်မယ် ကုန်းဘောင်ခေတ်နှောင်ပိုင်း ရှေးမြန်မာမင်းသမီး၊ မိဖုရား၊ အမျိုးသမီး အချို့ရဲ့ပုံတွေပါ။ အဲဒီခေတ်ဟာ အခုခေတ်လို အလှပြင်လုပ်ငန်း၊…
ဘုရားပန်းအိုးတွေ လဲတဲ့အခါ ဘာတွေ ဆောင်သင့်၊ ရှောင်သင့်တယ် ဆိုတာ မဖတ်ရသေးသူတွေအတွက် ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
October 15, 2018 Funny PopinဗဟုသုတNo Comment on ဘုရားပန်းအိုးတွေ လဲတဲ့အခါ ဘာတွေ ဆောင်သင့်၊ ရှောင်သင့်တယ် ဆိုတာ မဖတ်ရသေးသူတွေအတွက် ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ကြာခဲ့ပါပြီ။ နွေရာသီ မနက်ခင်းတစ်ခုတွင် ဖြစ်၏။ ထိုနေ့က အဘနှင့်ကျနော် ရွာထိပ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သို့ လမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့၏။ ထိုစဉ် အိမ်ငှါးတန်းတစ်ခုရှေ့မှအဖြတ် “လူလေး ဟိုးမှာကြည့်စမ်း”ဟု အဘက ပြော၍ လှမ်းကြည့်ရာ အိမ်အတက်အဆင်း ပြုလုပ်ရာ ဖိနပ်ခုံတွင် ဘုရားပန်းအိုးများ တန်းစီချ၍…
လူ့မျက်လုံးထဲမှာ အသက်ရှင်နေထိုင်နေတဲ့ ၁၅စင်တီမီတာအရွယ်သံကောင်
October 15, 2018 Funny PopinဗဟုသုတNo Comment on လူ့မျက်လုံးထဲမှာ အသက်ရှင်နေထိုင်နေတဲ့ ၁၅စင်တီမီတာအရွယ်သံကောင်
Karnataka မြို့မှာနေထိုင်တဲ့အသက် ၆၀ အရွယ် အမည်မသိအမျိုးသားတစ်ဦးဟာ မျက်လုံးထဲပိုးကောင်ဝင်နေတဲ့အတွက် လာရောက်ခွဲထုတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မျက်လုံးထဲဝင်နေတဲ့ပိုးကောင်ကတော့ ဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင်တောင် အသည်းယားခဲ့ရတဲ့ အဖြူရောင် သံကောင်တစ်ကောင်ပါပဲ။ ဆေးရုံကိုရောက်လာလာခြင်းမှာပဲ လူနာရဲ့မျက်လုံးထိခိုက်ဖို့ အလွန်နီးကပ်လွန်းနေတာကြောင့် ဒေါက်တာ Srikanth Shetty ကိုယ်တိုင် အမြန်ဆုံးခွဲစိတ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။…
အတုမရှိ မြတ်စွာဘုရားဟာ ဘာကြောင့် ဆံတော်မပါယ်ခဲ့ပါသလဲ..?
October 15, 2018 Funny PopinဗဟုသုတNo Comment on အတုမရှိ မြတ်စွာဘုရားဟာ ဘာကြောင့် ဆံတော်မပါယ်ခဲ့ပါသလဲ..?
ဒီမေးခွန်းကို စတင်မေးခဲ့သူက ဘာသာခြားတစ်ယောက်။ ကြက်သေသေပြီး ဆွံအခဲ့သူက ကျွန်တော်နဲ့သူငယ်ချင်းတွေ။ သူကမေးတယ်… “”ဘုရားရှင်က ချစ်သားရဟန်းတွေကျတော့ ဦးပြည်းခေါင်းတုံးနဲ့။သူကိုယ်တိုင်ကျတော့ ဆံတော်အရှည်နဲ့ကျတော့ သိပ်နည်းလမ်းမကျဘူးမဟုတ်လား။ စော်ကားချင်လို့မေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကြိုပြီးတောင်းပန်တာပါ။ သိချင်လို့ပါ။ တကယ်လို့တပည့်ရဟန်းတွေကို ဦးပြည်းခေါင်းတုံးနဲ့ဆိုရင် သူလည်း ဦးပြည်းခေါင်းတုံးဖြစ်သင့်တယ်မဟုတ်လား။ ဒါမှနည်းလမ်းကျမှာပေါ့””….တဲ့။…
အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတာကြောင့် ပြန်နွှေးမစားသင့်တဲ့ အစားအစာ ( ၇ ) မျိုး
October 15, 2018 Funny PopinဗဟုသုတNo Comment on အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတာကြောင့် ပြန်နွှေးမစားသင့်တဲ့ အစားအစာ ( ၇ ) မျိုး
ကျွန်တော်တို့မှာ စားကြွင်းစားကျန်များကျန်ရှိလျှင် အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့အကြိုက်ဆုံးအစားအစာဆိုရင် ၂ကြိမ်၃ကြိမ်နွေးပြီး ပြန်စားတတ်ကြပါတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ တစ်ချို့ အစားအသောက်များဟာ ပြန်နွေးပြီးနောက် စားဖို့ဘေးကင်းသော်လည်း တစ်ခြားအစာများဟာ ဘေးမကင်းဘဲ ကျွန်တော်တို့ကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ကျန်းမာသောအစားအစာတချို့ကို ပြန်နွေးတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာ ယုံဖို့ခက်ပါတယ်။…
အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွေမှာ သင့်အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းများ
October 14, 2018 Funny PopinဗဟုသုတNo Comment on အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွေမှာ သင့်အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းများ
ညဘက်တစ်ယောက်ထဲလမ်းလျောက်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာ ထူးဆန်းတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတာမျိုး ၊ ဟင်းချက်နေရင်း ရုတ်တရက်မီးထလောင်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ အယောင်ယောင်အဝါးဝါးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေ ကြုံလာတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကိုပြောပြသွားမှာပါ။ ၁- တကယ်လို့ သင့်ကိုအတင်းအကြပ်ကားပေါ်တင်ပြေးမယ်ဆိုရင်တော့.. သင်ပိုင်ဆိုင်တဲပစ္စည်းတစ်ခုကို သူတို့မသိအောင် အောက်ပစ်ချထားခဲ့ပါ။ ဒါပေမယ့် သင့်ဖုန်းကိုတော့ အမြဲတမ်းသင်နဲ့အတူပါအောင်ယူသွားပါ ။…
သင်သတိမထားမိသေးတဲ့ နေ့စဉ်သုံးစွဲနေတဲ့ပစ္စည်းရဲ့ အသုံးဝင်ပုံလေးများ
October 14, 2018 Funny PopinဗဟုသုတNo Comment on သင်သတိမထားမိသေးတဲ့ နေ့စဉ်သုံးစွဲနေတဲ့ပစ္စည်းရဲ့ အသုံးဝင်ပုံလေးများ
၁- အအေးဘူးအဖုံးမှ အဖုလေးသုံးခု ဒီအဖုလေးတွေဟာ ကလေးတွေ ဖိကစားဖို့အတွက်တပ်ပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ မိသားစုလိုက်စားသောက်နေတဲ့အခါမျိုးမှာ ကိုယ့်အအေးဘူးက ဘယ်ဘူးလဲဆိုတာကို မှတ်သားလို့ရအောင်ထည့်ပေးထားတဲ့အဖုလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂- ဘီယာပုလင်းလည်ပင်း ဘီယာပုလင်းဟာဘာကြောင့်လည်ပင်းရှည်နေရသလဲလို့တွေးကောင်းတွေးမိဖူးမှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဘီယာပုလင်းကိုကိုင်တဲ့အခါမှာ ဒီလည်ပင်းနေရာကိုပဲ ကိုင်တွယ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ လည်ပင်းနေရာဟာ ဖန်သားပိုထူတဲ့အတွက် လက်ကအပူတွေ…
မိမိ သားသမီးတွေငြိမ်နေရင်ပြီးရောဆိုပြီး လက်ကိုင်ဖုန်းပေးကြည့်အလိုလိုက်တတ်တဲ့ မိဘတွေအတွက်ပါ
October 14, 2018 Funny PopinဗဟုသုတNo Comment on မိမိ သားသမီးတွေငြိမ်နေရင်ပြီးရောဆိုပြီး လက်ကိုင်ဖုန်းပေးကြည့်အလိုလိုက်တတ်တဲ့ မိဘတွေအတွက်ပါ
မိမိ သားသမီးတွေငြိမ်နေရင်ပြီးရောဆိုပြီး လက်ကိုင်ဖုန်းပေးကြည့်အလိုလိုက်တတ်တဲ့ မိဘတွေအတွက်ပါ၊ မိမိသားသမီးတွေငြိမ်နေရင်ပြီးရောဆိုပြီး လက်ကိုင်ဖုန်းပေးကြည့်အလိုလိုက်တတ်တဲ့ မိဘတွေအတွက်ပါ3ဖုန်းအကြည့်လွန်ခလေးတွေ မျက်လုံးကိုက်၊ သွေးခြေပေါက်၊ ကောင်းကိုက်၊ မျက်လုံးယောင်ရမ်း လာပြီး ဆေးရုံးတက်ရတဲ့ ခလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ မိမိသားသမီးတွေငြိမ်နေရင်ပြီးရောဆိုပြီး လက်ကိုင်ဖုန်းပေးကြည့်အလိုလိုက်တတ်တဲ့ မိဘတွေအတွက်ပါ 4…